Ndazi njani ukuba bangaphi ababhalisi endinabo kwi-YouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Kulabo baphupha lokuba yiYoutuber eyaziwayo inani lababhalisi libalulekile. Okukhona likhulu inani lababhalisi ngaphakathi kweqonga, kokukhona ukufikelela kuya kuba kukusasazwa komxholo abawubeka kumajelo abo.
Ngeso sizathu namhlanje sifuna ukukubonisa indlela ekhawulezayo neyona ilula Fumanisa ukuba bangaphi ababhalisile abakhutheleyo kwisitishi sethu Ukusuka kwiYouTube. Yiyo loo nto ke siza kuba nakho ukufunda ngokuhluma kwejelo kwaye sichonge ukuba ngubani osilandelayo eqongeni.
Enye yeendlela ezikhawulezayo zokufumanisa ukuba bangaphi ababhalisele isiteshi sethu seYouTube kukwenza kwinguqulelo yedesktop. Kuya kufuneka singene kuphela kwiphepha elisemthethweni le-YouTube (Www.youtube.com) kwaye ungene nge-imeyile kunye negama lokugqitha.
Ngaba unayo ijelo le-YouTube? Kakuhle kakhulu. Kuya kufuneka uyazi ukuba inani lababhalisi libalulekile ekukhuleni kwakho ngaphakathi kweqonga. Ukuba uyakwazi ukufikelela kwisixa esithile, ungaqala ukufumana imali ngomxholo owufakela kwisitishi sakho.
Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba uyazi kakhulu ifayile ye Ababhalisi abatsha abongeza kwisitishi sethu. Kukho indlela ekhawulezayo yokufumanisa kwaye nantsi into esiza kuyichaza inyathelo ngenyathelo:
Vula iphepha YouTube kwiPC yakho (Youtube.com)
cofa kwifoto yeprofayile (kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini)
Kwiskrini esiphambili uza kubona idatha ethile enxulumene nejelo lakho, kubandakanya inani lababhalisi
Ukuba ufuna ukufumana irekhodi eneenkcukacha ezithe kratya malunga nababhalisi bakho kunye nokuba lingakanani ijelo elikhule kwiinyanga ezidlulileyo ungacofa ukhetho "Izibalo" kwicala lasekhohlo lesikrini.
Lawula ukufumana inani lababhalisi Ijelo lethu linakho ukwenzeka ngokusetyenziswa kweselfowuni kweYouTube. Inkqubo ilula kwaye nantsi amanyathelo ekufuneka uwalandele:
Cofa ku "Ijelo lakho"
Apha ngezantsi kwegama lakho lomsebenzisi inani lababhalisi liya kuvela okwangoku unejelo lakho le-YouTube.
Indlela yokuququzelela ababhalisile bam kwiYouTube
Ukusuka kwiqonga leYouTube awuzukukwazi ukubona ukuba bangaphi ababhalisile kwisitishi sakho kodwa uya kuba nakho nokuzikhethela. A) Ewe ungabona ezona zidumileyo kuqala okanye ubone ababhalisile bakutshanje.
Ukuba ufuna ukuhlela ababhalisile bakho Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukufikelela kwiYouTube ngeakhawunti yakho. Emva koko kuya kufuneka ucofe kwifoto yeprofayile kwaye ukhethe ukhetho kwi "Studio Studio":
Fikelela kwisithuba "ababhalisile”Kwaye ke khangela imenyu yokuhla ezantsi ngasekunene. Ukusuka kweli candelo uya kuba nethuba lokuhlela ababhalisile bakho njengoko ubona kufanelekile. Ungazicwangcisa ngokona kuthandwa okanye kutshanje. Ngale ndlela uya kuba nejelo elilungelelaniswe ngakumbi.
1 Ukusuka kwiPC
2 Ukusuka kwiselula
3 Indlela yokuququzelela ababhalisile bam kwiYouTube